I-Micronized Palmitoylethanolamide powder Manufacturer ehamba phambili
ICofttek ingumkhiqizi wempuphu ohamba phambili wePalmitoylethanolamide (PEA) eChina. Ifektri yethu inohlelo oluphelele lokuphathwa kokukhiqiza (i-ISO9001 & ISO14001), enomthamo wokukhiqiza wanyanga zonke wama-3200kg.
Ividiyo yePalmitoylethanolamide (PEA) powder (544-31-0)
I-Palmitoylethanolamide (PEA) powder Siziqu
Ukuhlanzeka I-98% i-MicA enobuthi A 98% powder
Ifomula Yamamolekhula: C18H37NO2
Isisindo Yamamolekhula: I-299.49 g / mol
I-Melt Point: 93 kuya ku-98 ° C
Igama lamakhemikhali: IHydroxyethylpalmitamide Palmidrol N-Palmitoylethanolamine Palmitylethanolamide
I-N- (2-Hydroxyethyl) hexadecanamide
InChI Key: I-HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
Ukuphila okungaphelele: 8 amahora
Isicelo: I-Palmitoylethanolamide (PEA) ingeyamalungu omndeni we-endocannabinoid, iqembu lama-amide acid amides. I-PeA kuye kwafakazelwa ukuthi inomsebenzi we-analgesic futhi wokulwa nokuvuvukala futhi isetshenziswe ezifundweni eziningana ezilawulwayo ezigxile ekuphathweni kobuhlungu obungapheli phakathi kweziguli ezindala ezinezimo zomtholampilo ezihlukile ezingaphansi.
I-Palmitoylethanolamide (544-31-0) I-NMR Spectrum
IPalmitoylethanolamide iyi-endogenic fatty acid amide ewela ngaphansi kwesigaba seNuclear Factor Agonists. Kwenzeka ngokwemvelo ekudleni okunjengosoya, amakinati e-lecithin, nomzimba womuntu.
IPalmitoylethanolamide yatholwa okokuqala ekuqaleni kwawo-1940. Ososayensi baqale bathola ukuthi ukusetshenziswa kwe-yolk oluyimpuphu yeqanda kukhuthaza ukuphendula komzimba okunempilo ezinganeni futhi kwehlisa ubungozi bokuthola i-rheumatic fever. Olunye ucwaningo luphethe ngokuthi izikhupha zamaqanda ziqukethe isakhi esikhethekile okungukuthi, i-PEA. I-PEA iphinde itholakale ekudleni okuphelele njengamakinati kanye ne-soya, okusiza ukuhlinzeka ngokuzivikela okuqinile nezinzuzo zezempilo.
Ngaphandle kokutholakala ekudleni okuthile, i-PEA nayo iyenzeka emzimbeni wethu ngokwemvelo. Amakhemikhali akhiqizwa emzimbeni wethu ngamangqamuzana ethu amaningi njengengxenye yokuphendula okunempilo komzimba. I-PEA yenziwa ngokukhethekile ngumzimba wethu ekuphenduleni ukuvuvukala. Kuyaziwa ukuphatha izinhlungu zethu emzimbeni ngokuvikela amasosha omzimba wethu ekwenzeni ngokweqile futhi kukhuthaza ukusabela okunempilo komzimba nokuvuvukala emzimbeni.
I-Palmitoylethanolamide powder isetshenziswa kakhulu njengomuthi wezinhlungu, i-fibromyalgia, ubuhlungu be-neuropathic, i-multiple sclerosis, i-carpal tunnel syndrome, nezinye izimo eziningi.
I-Palmitoylethanolamide kanye nomndeni we-Cannabinoid
I-Palmitoylethanolamide akusho ukuthi ivela ku-cannabis kodwa ingabhekwa njengengxenye yomndeni we-cannabinoid. I-PEA isebenza ngendlela efanayo ne-CBD (i-cannabidiol), engenye yezakhi eziyinhloko ze-cannabis kodwa ayinayo imiphumela yengqondo. Imikhiqizo ye-CBD ithandwa kakhulu kulezi zinsuku futhi itholakala cishe kuyo yonke into kusuka kowoyela kuya kukhilimu, nemikhiqizo yokudla. Imikhiqizo ye-CBD nayo isetshenziselwa izinzuzo eziningi ezingaba khona zezempilo, kufaka phakathi impilo yengqondo, yezinzwa nempilo ehlangene.
I-PEA nayo iyi-cannabinoid, kepha ihlaziywa njenge- endoi-cannabinoid njengoba yenziwa ngaphakathi komzimba. Kodwa-ke, yehlukile kwi-cannabidiol ne-tetrahydrocannabinol njengoba umzimba ungenzi ngokwemvelo la makhemikhali.
I-Palmitoylethanolamide icuphe i-alpha ye-PPAR evuthayo, evuselela amandla, nephikisayo. Lapho lawa maprotheni ayisihluthulelo esebenza, i-PEA imisa isenzo sezakhi zofuzo ezikwazi ukukhuthaza ukuvuvukala futhi sinciphise ukukhiqizwa kwezinto eziningana zokuvuvukala. I-PEA ibuye inciphise umsebenzi we-gene FAAH owehlisa i-anandamide yemvelo ye-cannabinoid futhi ikhulise amazinga e-anandamide emzimbeni. I-Anandamide inesibopho sokwehlisa ubuhlungu bakho, ukwehlisa ingqondo yakho, nokukhuthaza ukuphumula emzimbeni wakho.
I-PEA yaziwa nangokuthi ibopha kumaseli omzimba futhi inciphise ubuhlungu nokuvuvukala. Iqukethe i-palmitic acid esakhiweni sayo, esiza umzimba ukwenza iPalmitoylethanolamide emzimbeni.
Ngokwabanye ososayensi, ukwengeza nje ukudla kwakho i-palmitic acid ngeke kuthinte ukukhiqizwa kwe-PEA. Lokhu kungenxa yokuthi umzimba wakho uzosebenzisa kuphela i-PEA emzimbeni wakho kuphela lapho idinga ukwelapha ukuvuvukala noma ubuhlungu bakho. Lokhu kubangela amazinga e-PEA emzimbeni ngokujwayelekile ahlukahluka usuku lonke.
Indlela enhle yokuthola izinzuzo ze-PEA ukusebenzisa ukudla okunothe kwe-PEA noma izengezo ezijwayelekile.
Izinzuzo ze-Palmitoylethanolamide powder kanye nezicelo
I-PEA iboniswe ukuthi inezindawo zokudambisa izinhlungu nezokulwa nokuvuvukala futhi isetshenziselwe ukuphathwa kobuhlungu obungapheli kubantu abadala abanezimo zemitholampilo eziningi ezingaphansi. Isibonelo, ingahlinzeka ngomphumela osizayo njenge-adjuvant ekwelapheni izinhlungu ezisezingeni eliphansi ezigulini ezindala noma ingasetshenziswa yodwa ekuphathweni kobuhlungu obungapheli ezigulini ezibucayi esikhundleni se-analgesics yendabuko enengozi enkulu yemiphumela emibi.
Imiphumela ethembisayo ikhonjisiwe ekwelapheni ama-radiculopathies angahlinzekwanga nge-ultra-micronized formulation ye-PEA kanye nokwelashwa okuhlanganisiwe ne-alpha-lipoic acid ukunciphisa i-prostatitis engapheli / isifo esibuhlungu se-pelvic syndrome.
Ngezansi kunezinzuzo ezithile ze-PEA:
· Ukukhululwa Kwezinhlungu
Kunobunye ubufakazi obuqinisekisa ikhono le-PEA lokunciphisa ubuhlungu obukhulu. I-PEA iphenywe kubantu abangaphezu kwezinkulungwane eziyisithupha kanye novivinyo lomtholampilo olungama-6 kusukela ngawo-30. Kodwa-ke, isifundo kaningi sehlulekile ukwehlukanisa phakathi kobuhlungu be-neuropathic kanye ne-non-neuropathic. I- izinzuzo ze I-Palmitoylethanolamide ngoba ubuhlungu be-neuropathic abucaci kangako ngenxa yolwazi olwanele kuze kube manje.
Omunye umkhawulo kwakuwukuthi eziningi zalezi zifundo zazingenakho ukulawula kwe-placebo futhi ucwaningo lwekhwalithi ephezulu luyadingeka ukunquma ukusebenza kwe-PEA ekusizeni izinhlobo ezahlukene zobuhlungu.
Ocwaningweni lwezifundo zabantu eziyi-12, izithasiselo ze-PEA zikhombise ukusebenza ngempumelelo ekwehliseni ubuthakathaka besifo esingelapheki nesingena neuropathic ngaphandle kwemiphumela emibi. Labo bantu abangu-12 babevame ukunikezwa izithasiselo ze-PEA ezinemithamo phakathi kuka-200 kuye ku-1200 mg / ngosuku isikhathi esingaphezu kwamasonto amathathu kuya kwayisi-3. Isengezo sithathe cishe amasonto amabili ukufeza isimo sokuqeda izinhlungu. Ukuyithatha isikhathi eside kunondle imiphumela yayo ngaphandle kokubanga imiphumela emibi.
Olunye ucwaningo olwenziwe nge-300 noma i-600 mg / usuku lwe-PEA lubonise ukwehla okuqinile kwezinhlungu ze-sciatica esivivinyweni esibalulekile sabantu abangaphezu kwe-600. I-PEA inciphise izinhlungu ezingaphezu kuka-50% emavikini amathathu nje, okungafinyelelwa kakhulu ngamaphilisi ezinhlungu amaningi.
· Impilo yobuchopho nokuvuselelwa
I-PEA yaziwa futhi ukuthi inenzuzo yezifo ze-neurodegenerative kanye nohlangothi. Isengezo sibonakala sithuthukisa ukusebenza kobuchopho ngokusiza amangqamuzana obuchopho ukuthi aphile futhi anciphise ukuvuvukala.
Ekucwaningweni kweziguli ezingama-250 ezinesifo sohlangothi, ukwakheka kwe-PEA nge-luteolin kubonise izimpawu zokululama okuthuthukile. Kumenyezelwa futhi ukuthi kunomthelela omuhle empilweni enhle yobuchopho, emakhono okuqonda, nasekusebenzeni kobuchopho nsuku zonke. Imiphumela yabonakala ngemuva kwezinsuku ezingama-30 zokungezelela futhi lapho ngemuva kwezinyanga ezimbili zokungezelela, ukuthuthuka okwengeziwe kwaqashelwa.
Kokubili nge-luteolin futhi kukodwa, i-PEA ibonwe ukuvikela isifo sikaParkinson kumagundane lapho sisetshenziswa ne-luteolin. Inciphisa umonakalo ebuchosheni ngokuvikela ama-dopamine neurons. Kodwa-ke, kudingeka izifundo ezijwayelekile zomtholampilo ukuqinisekisa lokhu okutholakele.
Olunye ucwaningo lukhombise ukuthi i-PEA ene-luteolin isize ukuthuthukisa izici ze-neurotrophic ezifana ne-BDNF ne-NGF ezingamaprotheni amancane anamandla awusizo ekwakheni amangqamuzana amasha obuchopho. Kuthuthukise ikhono lobuchopho lokuvuselela amaseli nezicubu ezintsha ngemuva kokulimala okulimazayo emgogodleni noma ebuchosheni. Lapho i-PEA kanye ne-luteolin kwakusetshenziswa kumagundane kuthuthukisa ukuphulukiswa kwemizwa kumagundane ngokulimala komgogodla.
Ngenxa yokuvela kwemvelo kwama-cannabinoids e-PEA, imiphumela ikhombise ukuthuthuka ekuziphatheni kweziguli, imizwa. Kukhombise ukwehla kwengozi yokubanjwa kumagundane. Kodwa-ke, imiphumela yayo ekubanjweni komzimba isazophenywa kubantu futhi izifundo ezengeziwe ziyadingeka ukuqinisekisa lokhu.
· Imiphumela Enhliziyweni
Ukuhlaselwa yinhliziyo kwenzeka ngenxa yokuvaleka kwemithambo yegazi eqonde enhliziyweni. I-PEA yaziwa ngokuthola ukulimala kwezicubu zenhliziyo futhi inyuse ukugeleza kwegazi liye enhliziyweni okusiza ukunciphisa amacala okuhlaselwa yinhliziyo. Ucwaningo kumagundane lukhombise nokwehla kwamazinga okuvuvukala e-cytokine ezinhliziyweni.
Ukusetshenziswa kwe-PEA nakho kwehlise izinga lomfutho wegazi ophakeme kumagundane futhi kwavimbela ukulimala kwezinso ngokunciphisa izinto ezivuthayo. Ngokunciphisa imithambo yegazi, i-PEA yayisebenza kahle ukuvimba ama-enzyme nama-receptors akhulisa umfutho wegazi.
· Izimpawu zokudangala
Ocwaningweni olusanda kwenziwa, bangu-58 abantu abahlushwa ingcindezi belashwe nge-PEA. Imithamo ye-1.2 gm ngosuku yanikezwa iziguli isikhathi esingaphezu kwamasonto ayisithupha. Lokhu kuholele ekuthuthukiseni okusheshayo kwemizwelo nezimpawu zizonke. I-PEA uma ingezwa ekhonweni lokulwa nokucindezelwa okungukuthi, i-citalopram, yehlisa izimpawu zokudangala nge-6% ejwayelekile.
· Izimpawu zomkhuhlane ovamile
Olunye ucwaningo lukhombise ukuthi i-PEA iyikhambi elisebenzayo lokulwa negciwane lomkhuhlane elibanga umkhuhlane ojwayelekile. Kokunye ukuhlola kokuqala kwabantu abangaphezu kwezinkulungwane ezine, i-PEA ikwazile ukukhombisa umthelela omuhle ekuvikelekeni komzimba futhi yasiza ukunciphisa izimpawu ezinjengomkhuhlane ezigulini.
Kwesinye isifundo, amasosha amasha angama-900 anikezwa cishe i-1,200 mg ye-PEA eyanciphisa isikhathi samakhaza nezimpawu ezaphola ezinjengomphimbo obuhlungu, impumu egijimayo, umkhuhlane kanye nekhanda.
· Ukuvuvukala kwamathumbu
Okokugcina kodwa i-PEA isetshenziswe ngempumelelo ukuvuselela izimpawu zesifo samathumbu esivuthayo (IBS) ezilwaneni. Izengezo ze-PEA lapho zivivinywa kumagundane anokuvuvukala okungapheli kwamathumbu, zisize ekuhleleni ukunyakaza kwamathumbu futhi zavimbela ngempumelelo ukulimala kolwelwesi lwamathumbu.
Ukulimala kwamathumbu noma ukuvuvukala kubangelwa i-ulcerative colitis engaholela engozini yomdlavuza. Ukusetshenziswa kwe-PEA kumise izicubu ezijwayelekile zesisu ekukhuthazeni ukwanda komdlavuza kumagundane. I-PEA inciphisa ama-cytokines okuvuvukala nokukhula kwama-neutrophils namaseli omzimba aqinisa izimpawu zokulimala kwamathumbu.
Imithombo yokudla yePalmitoylethanolamide
Yize i-PEA iyi-fatty saturated acid, kufaka phakathi amafutha agcwele ekudleni kwakho kuzolimaza kakhulu kunokulunga. Ukudla ukudla okuphezulu emafutheni agcwele ngeke kwenyuse ukukhiqizwa kwe-PEA yomzimba wakho esikhundleni salokho kuzokwandisa ubungozi bokuthuthukisa izifo ezahlukahlukene ezingamahlalakhona nezivuvukalayo.
Ukudla okufana nemikhiqizo yesoya, i-soy lecithin, amakinati kanye ne-alfalfa eminye yemithombo emihle ye-PEA. Abantu abane-allergies yamantongomane kufanele beqe amakinati futhi badle okunye ukudla. Isikhuphasha seqanda ngomunye umthombo omuhle futhi singadliwa ngabantu abangenakho ukuzwela emaqandeni. Abathengi futhi bangakucabanga ukuthatha izithasiselo ze-PEA njengoba kuyindlela ephephile nenempumelelo.
I-PEA yengeza isilinganiso nokuphepha
Ngokuya ngocwaningo lomtholampilo, okungenani i-600 mg / usuku kungadingeka ukudambisa ubuhlungu bezinzwa, futhi amanani we-1.2 g / ngosuku angasetshenziswa ukwelapha ubuhlungu besifo sikashukela.
Ezigulini ezinesifo sikashukela ezinenkinga yamehlo, imithamo efinyelela ku-1.8 g / ngosuku yayiphumelela ekwehliseni ukulimala kwezinzwa zeso.
Ekwelapheni umkhuhlane ovamile, i-1.2 g / usuku lwe-PEA kwakuyizilinganiso ezijwayelekile.
Khuluma nodokotela wakho ngaphambi kokuthatha izithako ze-PEA njengoba i-PEA ingavunyelwe yi-FDA ukuthi ithathe imithamo emikhulu.
Ukudla i-Palmitoylethanolamide powder noma izithasiselo ngemithamo emincane, elinganiselwe ngokuvamile kubhekwa njengokuphephile. Kodwa-ke, izifundo zomtholampilo ezisezingeni eliphakeme ziyadingeka ngamanani aphezulu. Ukwengezwa kwesikhathi eside kwe-PEA kwaziwa futhi ukuthi kuphephile ngokuya ngezifundo ezithile ezincane.
Abakhiqizi abathile abasuka efektri yokukhiqiza i-PEA bancoma ukwehlukanisa umthamo ophelele ube izingxenye ezimbili bese bewudla emini. Kwezinye izimo, i-PEA enama-micronized, ngamagama alula ayi-palmitoylethanolamide powder, yaziwa ukuthi ingena kangcono emzimbeni futhi ososayensi babheka ifomu le-powder ukuthi liphakeme kunezinye izinhlobo.
Imiphumela emibi ye-PEA
Ukusetshenziswa komlomo kwe-palmitoylethanolamide ngokuvamile kubhekwa njengokuphephile kubantu abadala abaningi lapho kusetshenziselwa izinyanga ezifika kwezintathu. Kuze kube manje, azikho izinkinga ezinkulu noma ukuxhumana kwezidakamizwa nezidakamizwa okutholakele. Kodwa-ke, akukho lwazi olwanele lokuthi umuthi ungaphepha uma usetshenziswa isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezintathu. Imiphumela emibi ingafaka isisu esidabukisayo, okuyinto engavamile kakhulu.
Ukuze kucace, i-PEA ayibanga nezinkinga ezinkulu kunoma yiziphi izifundo ezingenhla kepha iswele izifundo ezifanele zokuphepha. Futhi, abukho ubufakazi obanele bokuthola inani lokusebenza kwe-PEA ezigulini ezinalezi zinhlobo zobuhlungu.
I-PEA imvamisa ithathwa njengephephile ekusetshenzisweni kwabantu abadala futhi izifundo ezimbalwa zikhombisile nezingozi ezinganeni. Kepha izifundo ezinkudlwana zizodinga ukuqinisekisa ukuphepha kwe-PEA ezinganeni. Ngenxa yokushoda kwedatha eyanele yomtholampilo, abesifazane abakhulelwe nabancelisayo banconywa ukuthi balandele isixwayiso futhi babonane nodokotela ngaphambi kokuthatha noma yiziphi izithasiselo ze-PEA.
I-PEA inciphise imiphumela emibi eminingi nobuhlungu ngenkathi ithuthukisa ikhwalithi yempilo. Izifundo zayo zisekela ukuphepha nokusebenza kahle kwe-acid enamafutha futhi kunconywa ukuthi ziphephile ekusetshenzisweni kwemitholampilo kwe-PEA. Ukwengeza kusebenza kakhulu kuma-syndromes wokucindezela kufaka phakathi i-carpal tunnel syndrome nobuhlungu be-sciatic. Ukwengeza kwe-PEA futhi kulula ukuthatha futhi kungaphathwa ngomlomo.
Khumbula ukubonisana nodokotela ngaphambi kokuthatha noma yiziphi izithasiselo ze-PEA njengoba amanani aphezulu we-PEA angaholela ezinkingeni ezithile. Yize izingqinamba zimnene futhi zingezimbi, i-PEA akufanele isetshenziswe njengendawo yezindlela zokwelashwa ezivunyiwe. Kodwa-ke, izinzuzo nezifundo ezichazwe ngenhla zenziwa ikakhulukazi ezilwaneni nasemaseli. Ubufakazi obuzinzile bomtholampilo busashoda.
Izifundo eziningi ebantwini ziyadingeka ukunquma imiphumela ye-PEA ekukhulisweni kwempilo yamathumbu, enhliziyweni nase-histamine.
I-Palmitoylethanolamide (PEA) powder iyathengiswa & Lapho ungathenga khona iPalmitoylethanolamide (PEA) powder ngobuningi
Singumhlinzeki we-Palmitoylethanolamide (PEA) onguchwepheshe we-Palm iminyaka eminingi, sinikezela ngemikhiqizo ngentengo yokuncintisana, futhi umkhiqizo wethu ungowekhwalithi ephezulu kakhulu futhi uhlolwa ngokuqinile, ngokuzimela ukuqinisekisa ukuthi kuphephile ukusetshenziswa emhlabeni wonke.
UHansen HS. I-Palmitoylethanolamide namanye ama-anandamide congeners. Indima ehlongozwayo ebuchosheni obugulayo. I-Exp Neurol. 2010; 224 (1): 48-55
Petrosino S, Iuvone T, Di Marzo V. N-Palmitoyl-ethanolamine: i-biochemistry namathuba amasha okwelapha. I-Biochimie. 2010; 92 (6): 724-7
UCerrato S, Brazis P, della Valle MF, Miolo A, Puigdemont A. Umphumela we-Palmitoylethanolamide ku-histamine eyenga i-histamine, i-PGD2 ne-TNFα ekhishwa kumaseli wesikhumba se-canine. Vet Immunol Immunopathol. 2010; 133 (1): 9–15